Ifoto: ungayiguqula njani ibe ngumzobo opeyintiweyo? | Ulwazi oluluncedo lomntu wonke.
Ifoto: ungayiguqula njani ibe ngumzobo opeyintiweyo?
Sebenzisa iFotohop. ZIKHONA iifilitha ezifanelekileyo ezenza ifoto ibonakale ngathi itsaliwe, ngelixa kukho iindlela ezahlukeneyo zokuzoba, nkqu namanzi. Kwaye ukwenza oku kulula, nangona kukho tutorials zevidiyo koku.
Kukho abahleli abakhethekileyo, umzekelo, inkosi yeOlimpiki; kukho imisebenzi yokuzoba ngeekhati zamanzi, iipende zeoyile, kunye nepensile; kufuneka ulungiselele ukhetho olunyanzelekileyo ngesandla
Ukuba umbuzo ngowokwenza umfanekiso ozobe kumfanekiso ohleliyo kwi-Photoshop umhleli, ndiye ndicebise ukhetho lwevidiyo elandelayo (ngaphandle kweevidiyo esele ziphendulwe):
Ukuba lo mbuzo ubhekisa ekuyileni komzobo opeyintwe usebenzisa iinkqubo zomntu wesithathu (le ndlela ilunge kakhulu kwabo abangaziyo ukuba bayisebenzisa njani iFotohop), ke kukho elinye ibali (kukho neenkqubo ezikwi-Intanethi apho unokwenza umzobo okanye ubom ngobomi obuvela kwifoto-ividiyo malunga nenkqubo enjalo):
Kwaye kukho ukhetho olunjalo (kusetyenziswa i-CorelDRAW)
Bona ezinye iinkqubo apha kunye nalapha.
I-PS: ilizwi elikwividiyo ebekiweyo yinto ethile engaqhelekanga, efanayo naleyo ihlala ibiza amagama kumguquleli kaGoogle. Inokubonwa ukuba abadali bevidiyo babetheliwe =)
Ewe, ndiyathanda ukwenza isiphumo esifanayo ngokuzenzekelayo kwisiza- http://www.imgonline.com.ua/cartoon-puzzle.php (apho ibizwa ngokuba yikhathuni)
Nokuba useto olungagqibekanga, lusebenza kakuhle!
Ukwenza umfanekiso kwifoto kulula kakhulu.
Kukho iindlela ezahlukeneyo zokunika imbonakalo yomfanekiso ngepensile okanye stylize nawuphina umfanekiso njengomfanekiso opeyintwe ngee-watercolors, gouache, ioyile okanye ezinye izixhobo.
Ukuba awukhathali ngomgangatho kunye nenyani yomfanekiso, kodwa kufuneka uyenze ngokukhawuleza, unokufumana abahleli bemifanekiso kwi-Intanethi, abanele kwi-Intanethi, umzekelo, ezi: IfotoFunia , Imizobo yepensile yePensile okanye apha kule ndawo Iinkonzo zasimahla ze-Intanethi ezivela ePho.to. Zininzi nezinye ezifanayo, kodwa zonke zine-drawback enye ebalulekileyo - umgangatho ophantsi wokulungiswa kwemifanekiso, kunye nokukhethwa kweziphumo zestylis kuncinci kwaye izixhobo zokuguqula azinakwenziwa ngokwezifiso. Andisebenzisi iinkonzo ze-intanethi ngenxa yesi sizathu, ngokwezezimali, hayi ekumgangatho ophezulu kwaye akukho mdla. Amanqaku e-qu yakho; engekho ngokupheleleyo.
Indlela yesibini nayo ilula kakhulu, kodwa inika ithuba lokwazisa umntu othile, izithunzi zantlandlolo kumfanekiso ngamnye. Le yindlela isebenzisa iinkqubo ezincinci ezikhethekileyo kunye nokusetyenziswa. Kukho uninzi lweenkqubo ezinjalo, ukusuka ezilula kakhulu, apho umgangatho ungadluli kakhulu kubahleli be-intanethi ukuya kweziingcali ngokupheleleyo. Ukusuka kwiinkqubo ezilula kakhulu ndingacebisa IfotoSketcher и I-Dynamic auto-painter.
Kwinkqubo IfotoSketcher ilula kakhulu ukusebenza, kukho izicwangciso ezimbalwa kwaye ngokuzitshintsha unokufumana isiphumo esinyanisekayo.
Kwinkqubo I-Dynamic auto-painter Kulula kakhulu ukusebenza, kodwa umdla ngakumbi, yonke inkqubo yokutshintsha umfanekiso inokujongwa ngexesha lokwenyani kwaye imiswe xa wanelisekile sisiphumo, kukho uninzi lweeprofayili kulo, zezitayile ezahlukeneyo zokupeyinta. Ukuba ufaka iinkqubo ezongezelelweyo zokurekhoda isikrini kunye nokuguqula, unokwenza i-animated quot; I-Gifkiquot;, umzekelo, le:
Enye inkqubo elungileyo kakhulu kwaye inamandla, inqanaba lobuchule - I-AKVIS Sketch. Ukusetyenziswa, le nkqubo ayinkimbinkimbi, kodwa amandla ayo okuhombisa imifanekiso phantsi komzobo athelekiswa nobuchule Ifoto yefotoa. Le nkqubo inokusebenza njengesiqulatho sokuhlelwa kwemifanekiso emininzi. Qonda izixhobo kunye noseto lwenkqubo I-AKVIS Sketch Kulula kakhulu, kodwa ukuba kunjalo nangabuphi na ubunzima buvela-jonga eofisini. Indawo yomqambi, zininzi izixhobo zokujonga kunye nezifundo eziqondakalayo.
Ukusuka kuluhlu olufanayo kunye nenkqubo , eyilelwe ukulingisa iindlela ezahlukeneyo zobugcisa. Sebenzisa iinkqubo I-AKVIS Sketch и I-AKVIS ArtWork kwimizuzu embalwa unokwenza i-stylization enokwenzeka kakhulu yeefoto ngeendlela ezahlukeneyo zobugcisa.
Kwaye ngokuqinisekileyo, owona mgangatho uphambili wokulungisa imifanekiso ye-bitmap unokufumaneka kumhleli wegraphic walo lonke ixesha - Ifoto yefotoe (Adobe Photoshop) Ndisebenzisa inguqulelo IAdobe Photoshop CS6 13.0 Yandiswa kodwa iinguqulelo zangaphambili ziya kufezekisa umgangatho ophezulu kakhulu kunye nemifanekiso yokwenyani.
Kunzima kakhulu ukuzimela kakuhle iFotoshop, kodwa unokufunda ukusebenzisa ezinye iindlela kunye nokuhlutha ngokukhawuleza. Jonga ezi tutorials zevidiyo ngokukodwa kwisifundo sakho kwaye awuyi kuba naziphi na iingxaki yenza umfanekiso kwifoto.
Ukutshintsha ifoto yokwenyani kunye neya kutsaliwe, ufuna nje umhleli weefoto woku.
Mna ngokobuqu ndisebenzisa le ndawo.
Apha unokutshintsha zonke iifoto zakho zibe yimifanekiso, oko kukuthi, kule ndawo unokujika ifoto ube ngumzobo oepeyintiweyo.
Zininzi iindlela indlela yokunika imifanekiso isiphumo somfanekiso. Eyona ixhaphakileyo kwaye mhlawumbi yeyona ndlela ilula endiyaziyo yokusebenzisa inkqubo I-Dynamic auto-painter. Le nkqubo iya kwenza ngokuzenzekelayo yonke into eyimfuneko ukunika iifoto ukulingiswa komzobo wepensile.
Unokwenza yonke into ngesandla, ekubeni ulinganise i-Photoshop. Kodwa lixesha elide kwaye lifuna umzamo othile.
Unokuguqula ifoto ibe ngumzobo opeyintiweyo okanye uguqule umfanekiso wedijithali ube ngumfanekiso okanye umzobo ozohonjiswe ngeendlela ezahlukeneyo, ngeendlela ezininzi:
Sebenzisa abahleli bemifanekiso, iinkqubo ezikhethekileyo ezifuna ukufakelwa kwikhompyuter yakho, ezi nkqubo zisetyenziselwa ukuhlela imifanekiso, kubandakanya nokuguqula imifanekiso ibe yimizobo kwiphepha lesikhonkwane, ipeyinti, ipensile
Sebenzisa abahleli bemifanekiso kwi-intanethi
Sebenzisa iinkqubo ezisetyenziselwa ukuhambisa iifoto ukusuka kwikhamera ukuya kwi-hard drive yekhompyuter; zingasetyenziselwa ukuhlela imifanekiso kunye nokuguqula ifoto ibe ngumfanekiso.
Unokwenza ngaphandle kweefotoefoto, kwi-Intanethi kukho uninzi lwabahleli beefoto zasimahla kunye neetemplate zemifanekiso, apho ulayisha ngokulula ifoto, nakwi-quot; iboniswa ngefuthe olifunayo.
Omnye wabo ngu-http: //funny.pho.to/ru/ (kodwa ubunzima babo)
Iziphumo zomzobo ziya kujongeka njengento enje (kodwa ayisiyiyo kuphela le qu; umzobo; imbonakalo itemplate, kukho okungcono)
Kukho neqela leetemplethi zeeposikhadi, kodwa ngokwemvelo kufuneka wenze ngokukhethekileyo kwiFotohop
Namhlanje, lo asisengomsebenzi unzima, kuba zininzi iinkqubo zokuguqula ifoto eqhelekileyo ibe yimizobo epeyintiweyo. Ungasebenzisa I-Photoshop, iPhotosSketcher, Paint, Dynamic Auto-Painter. Ezi nkqubo zinokukhutshelwa simahla kwi-Intanethi.
I-Photoshop ineefilitha ezizodwa eziza kwenza ukuba ifoto yakho inganeli nje ukuzoba kodwa ikwayihonjisiwe kwaye ijijekile kwaye nantoni na угодно
Into ephambili kukuba ufake iFotohop, kodwa kulula ukuyifumanisa
Molweni nonke! Kule mihla, ukuze ufumane impendulo kwimibuzo yethu, kufuneka uye kwi-intanethi .. Kwaye kumbuzo okukhathazayo, zininzi ezahlukileyo kwaye ezibaluleke kakhulu kubahleli bezithombe ezikhululekileyo, ngoncedo lwabo uya kufunda ngokulula indlela yokuguqula iifoto zibe yimizobo epeyintiweyo! Ndiyisebenzisa kule ndawokwaye andinangxaki. Ngoncedo lwale ndawo, unokujika eyakho kunye nezinye iifoto ube ngumzobo oepeyintiweyo!
exhonyiweyo Ukudutshulwa kunye nevidiyo
Imibuzo ye-57 kwiziko ledatha eliveliswe kwimizuzwana ye-0,356.